13 Baishak, 2075 | 26 April, 2018 Thursday
साउने झरीको त्यो दिन
2018-04-11 | तीताेपाटी डट कम
केदार नाथ खरेल-
म एस. एल.सी. परिक्षा दिएर छुट्टीमा घरमा बसेको थिए। घरमा बार्षिक तलब दिएर बिनोद दाईलाई घरेलु कामदारको रुपमा राखिएको थियो । तर बिनोद दाई हाम्रो घरको एकै परिवार जस्तै हुनुहुन्थ्यो। म घरमा गएको बेला घरको हरेक काममा बिनोद दाईलाई साथ दिन्थे। म भन्दा सात बर्ष जेठो थिए बिनोद दाई तर हामी साथी साथी जस्तो जिस्किने ठट्टा गर्ने गर्थ्यौ । म पनि उन्नाइस बर्षको ठिटो थिए। बैंस चढि सकेको थियो। केटा-केटी जिस्केको मन पर्न थालेको थियो। म पनि हाँसखेल गर्ने साथीहरु पाएपछि घरमा बस्न मन किन लाग्थ्यो र ?
बिनोद दाईसँगै जंगलमा जान्थे, बिनोद दाईले ठुलो रुखमा चढेर घाँस झार्नु हुन्थ्यो, हामी तल बसेर घाँस छिमल्थ्यौं। केटीहरु निहुरिएर घाँस छिमल्दा परेवा जोडी छर्लंग देखिन्थ्यो। म पनि उनीहरुसँगै घाँस छिमल्ने बाहनामा त्यतातिर आँखा लगाउँथे। यस्तो देख्दा आफुलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्थ्यो तर जिस्क्याउने र छेडखान गर्ने हिम्मत हुँदैनथ्यो।
एक दिनको कुरा हो मैले बिहान जंगलमा गाईगोरु लिएर गएको बेला बाटोमा पानीको धारामा मायालाई नुहाउन लागेकी देखें।, उनका साना भाईहरु साथमा थिए तर पनि लाजै नमानी माया नाङ्गै नुहाएकी थिइन। मैले तल देखि माथीसम्म नियाले। सोह्र बर्षकी केटी हर्मोन को कमीले हो कि किन हो तल गैरी खेतमा झारहरु उम्रेका रहेनछ। माथि स्याउका दाना जस्ता गोलाकार दुईवटा दानाहरु पुटुक्क परेका पोटिला थिए। उनले मलाई नजिक आएपछि देखिन। लाजले भुतुक्क हुँदै हतार हतार छेउमा राखेको लुंगीले तल माथि छोप्ने गरी ढाकिन।
उनलाई समस्या परेको देखेर म त्यहाँ अलमल गरेर बस्न चाहिन म बोटो लागे। जब गाईगोरुलाई माथि चरनमा पुर्याएर फेरी त्यही बाटो फर्केको थिए तिनीहरु अझै नुहाई रहेकी देखे । पहिले झैं अहिले पनि नाङ्गै नुहाएकी थिइन। पहिले त साबुन लगाएकी थिइनन् तर अहिले त साबुन लगाएर नुहाउँदै थिइन्। मलाई अझै राम्रोसँग नियालेर हेर्न मन लाग्यो किनभने त्यो भन्दा पहिले मैले कुनै जवान केटीको खुल्ला शरिर देखेको थिइन्। म घारीमा पसेर उनको सामने नजिक हुने गरी लुकेर हेर्न थाले। मैले उनलाई देखेको छु तर उनले मलाई नदेखेको हुनाले उनी मनोमानी आनन्द लिंदै नुहाउँदै थिइन्। घरी माथी हातले गोलाकार स्याउका दानाहरुलाई मुसार्थिन घरी तलतिर औंला भित्र हालेर आनन्द लिन्थिन्। जब मायाले नुहाएर सकेर कपडा लगाइन तब म आए । मलाई देख्नासाथ उनी लाजले टाउको निहुर्याउँदै लुगा च्यापेर बाटो लागिन।
त्यसपछि पनि मायासँग दैनिक भेट हुन्थ्यो तर लाजले बोल्न सकेकी थिइन। फेरी एक दिन म गोठालो जाँदासँगै परिन । उनी लाजले बोल्न सकेकी थिइनन् तर मैले नै बोलाए। उनी टाउको निहुर्याएरै जवाफ फर्काउँथिन्। दुई दिनपछि माया अलि खुलेर बोल्न थानिन तब मैले मायासँग सल्लाह गरे भोली तिमी र म एक्लै छुट्टै ठाउँमा चरणमा जाने ल । उनले पनि हुन्छ भनिन् यो कुराले मेरो मनमा झन् समर्थन र विश्वास बढ्यो ।
हाम्रो सल्लाह मुताबिक हामी उनको काकाको खोरियामा जाने निधो गर्यौं। हिजो मात्रै सबै घैया टिपेको छ भोली त्यही जाने भनेर मायाले नै सल्लाह दिइन। तर साथीहरु पनि पछि लागे भने हलुवामा बालुवा मिसिएझैं हुन्छ भनेर साथीहरुलाई झुक्याउन् मैले उपाय निकाले। जब उनीहरुले जंगल जान बोलाए तब मैले भने तपाईहरु जाँदै गर्नु म पनि त्यही आउँछु। साथीहरु गएपछि हामीले उनीहरु गएको ठाउँमा नगई अर्को ठाउँमा गयौं जहाँ प्लान गरेका थियौं।
बर्षाको साउनेझरी दर्किरहेको थियो, हामी दुईजना जंगलको बीचमा एउटा गोठमा थियौं। अरु कोही नभएको हुनाले त्यहाँ हाम्रो मनोमानी जे चाहे त्यही हुन्थ्यो। गाई गोरुहरु घाँसमा मस्त थिए। कहिले पानी रोकिन्थ्यो, कहिले दर्किन्थ्यो, जब पानी रोकिन्थ्यो हामी दुई जना नै ओर्लेर काँक्राहरु टिपेर ल्याउँथ्यौ अनि नुन र खुर्सानीसँग चोपेर काँक्रो खान्थ्यौ।
माया सोझी र लजालु थिइन, म पनि सोझो र लजालु स्वभावको थिए। तर पनि केटा मान्छे केटी मान्छे भन्दा अलिक खुल्ला हुन्छन् । त्यही स्वभावले होला मलाई पनि जति सुकै सोझो भएपनि मैले नै उनलाई प्रस्ताव राखें उनले सोझै इन्कार गरिन्, जति फकाए तर उनी पटक्कै मान्दिनन्। एक पटक त सोचे जबरजस्ती गरौं कि भनेर तर मलाई ति सोझी केटीको सोझोपन न उनको विश्वासलाई चकनाचुर पार्न मन लागेन। उनको नाम माया थियो, नाम अनुसारको उनको व्यवहार पनि मायालु र निष्कपट थियो।
भर्खरै सोह्र बर्ष लागेकी माया रुपमा पनि असाध्यै राम्री र शरिर पनि सुडौल मिलेको अति नै सुन्दरी थिइन। हामी जिस्किंदै थियौ त्यही बेला उनको बुबाले मायालाई पर डाँडाबाट बोलाउनु भयो । उसले प्रतिउत्तरमा हजुर भनिन् । पानी धेरै परेको छ झोरा खोल्सा बढेको छ म लिन आउँछु एक्लै नआउनु भन्नु भयो । उनले भनिन् दाई पनि साथमा हुनुहुन्छ बुबा डराउनु पर्दैन म दाईसँगै आउँछु भनिन् । को छ साथमा भन्दा उनले मेरो नाम लिइन। तब उनको बुबाले भने ए ल-ल अलि होसियार गर्नु। म भनेपछि उनीहरुको परिवार ढुक्क हुन्थे। किनभने म सोझो र कहिले पनि जिस्किने, चल्ने नगर्ने भलाद्मी मान्छे थिए। त्यसैले मलाई धेरै भरोषा र विश्वास गर्थे । म पनि अहिलेसम्म त्यस्तो तडक-भडकमा थिइन। त्यो बेलासम्म दिनको चार बजेको थियो।
जब उनको बुबा फर्केर गए तब हामी फेरी जिस्किन थाल्यौ। शरिरका हरेक अंङ्गमा हातहरु पुगे पनि र जति कोसिश गर्दा पनि मायालाई मनाउन नसकेपछि म जुवामा हारको जुवाडे झैं भए । अन्तमा पाँच बजेतिर घरमा जानको लागि गाईगोरुलाई झोर्दै जम्मा पार्दै लिएर जान थाल्यौ। त्यो दिन मायालाई लाज पनि हरायो। उनी भने मसँग धेरै खुलेर बोल्न थालिन्। ति सबै हर्कतले उनलाई कुनै असर परेन बरु झन् मलाई नै उल्टै जिस्क्याउने, गिज्याउने गर्न थालिन् ।
केही दिन पछि उनले विवाह गरिन। त्यसपछि उनीसँग मेरो भेटघाट भएन। एक बर्ष पछि मैले सुने उनी बच्चा जन्माउँदा साथी नझरेर उनको मृत्यु भयो रे। यो कुरा सुनेर मेरो मनमा धेरै पीडा भयो । हिजो-आज पनि कहिले काहिं त्यो दिनहरुको झ-झल्को आउँछ।
नोटः यो लेख काल्पनिक मात्र हो, नाम तथा यो विषयमा यदि कसैको जीवनमा मेल खाएमा त्यो संयोग मात्र हुनेछ । यदि कोही कसैको जीवनमा मेल खाएमा लेखक क्षमा चाहन्छ।
केही केटाकेटीलाई पुष्पलालको फोटो नहटाई भएन- प्रधानमन्त्री ओली
समृद्ध झापाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय झापालीको भेला कतारको दोहामा
साउदी जेलमा रहेका उमेश यादवलाई मृत्युदण्डको फैसला
कतारले १४दिन भित्र कामदारहरूको समस्या समाधान गर्ने
गृह मन्त्रालयद्वारा ६० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरूवा